Ụbọchị My Pet » 10 Mere nwamba karịrị enyi nwoke
site Tegan Jones
Ị na-na-na ogbo ná ndụ mgbe ị na-atụle ihe a furry, purring ibe ị nọgide na-ụlọ ọrụ? Atụla ihere; na-agbakụ ya. Nwamba bụ kediegwu, na m ga-aga nnọọ na-ekwu na ọtụtụ ikpe, ha na ọbụna karịa ka enyi nwoke. Chọpụta, ha na-agaghị enwe ike imezu ahụ stof (na nke ahụ bụ maa bụghị ihe anyị pụtara site Ụbọchị My Pet), ma nke ahụ bụ ihe na-internet, nkà na ụzụ na kaadị akwụmụgwọ bụ maka. Ihe ha nwere ike ime bụ nye gị n'anya, ụlọ ọrụ na a dum ọtụtụ nke ọchị. Ndị mmadụ pụrụ tụọ 'crazy cat nwaanyị' ihere gburugburu niile ha chọrọ, ma e nwere ọtụtụ hilariously generalized ihe ịhọrọ a cat n'elu a enyi nwoke.
1. Ha na-adịkarịghị uche Mark
foto site orphum CC
Ị maara na m na-ekwu okwu banyere ụlọ mposi ebe a, ladies. Nwamba bụ n'ozuzu incredibly kpọmkwem mgbe ọ na-abịa aiming.
2. Ha na-Onwe Ha Ọfọn groomed
foto site Luke Jones CC
Nwamba n'ezie na-eche banyere ha dị na-onwe ha na-achọ ezi. Chọpụta, ụfọdụ nke ogologo haired na udiri anumanu mkpa ọzọ brushing, ma ọ dịkarịa ala ha ụtọ na ya.
3. Ha na-ala mmezi
foto site oskay CC
All nwamba chọrọ bụ na-ehi ụra, nri, pats na playtime. Ị ga-enweghị obibi ọjọọ ọnọdụ uche, mmetụta uche na-eleghara anya ma ọ bụ n'iji ya gee ntị n'ime TurtleMan, Duck Dynasty ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ unyi ụmụ okorobịa iyi na-enwe na-ekiri.
4. Ha kasie gị obi mgbe ị na-arịa Ọrịa
foto site contraption CC
Nwamba nwere a isii uche mgbe ọ na-abịa ọrịa, na-na-karịsịa akasi obi ma na-ahụ n'anya mgbe ha nwe bụ na-arịa ọrịa. Juxtapose a na nwoke sterịn doro anya nke ị mere na ha anaghị ibutecha Man flu na ị pụrụ ịhụ ihe mere nwamba bụ elu nhọrọ.
5. Ha na-Ị Ọkụ
foto site Alisha Vargas CC
Gị cat ga-ekpe ikpe ma ọ bụ sere n'ebe unu ruru ka horrific icicles na ị na-akpọ ụkwụ. Ha na-enwe obi ụtọ na snuggle elu ma na-gị na glasia ụkwụ na-ekpo ọkụ.
6. Ọ dịghị Na-Iwu
foto site admiller CC
Ọ dịghị crazy nne na-iwu bụ a nnukwu gbakwunyere na m akwụkwọ.
7. Pats na naanị Pats
foto site Emilian Robert Vicol CC
Ha anaghị atụ anya ka ihe ọ bụla ọzọ si a ịhịa aka n'ahụ. Ị maara ihe m na-ekwu site na, gentlemen.
8. Ha adịghị ekpe ikpe gị eri ihe
foto site Alex Goodey CC
Ime a 1am nri si ahụekere butter, chocolate ibe na ngaji? A cat ga-ala na na. Ọ bụghị ịkatọ anya ma ọ bụ unsubtle hints banyere mgbatị memberships ebe a.
9. Ọ dịghị Ajị Ihu na kpuo
foto site Ken Bipute CC
Yeah, na pun mere. Ana m asị gị nnọọ.
10. I Nwere Access ha Medical Records
foto site anja_johnson CC
Na na ada ụda creepy, na m kpam kpam ọma na na. Ma, ị ga-ekweta na ọ bụ-akasi obi ịmara na e nwere ka ọ na anya Vd okwu na gị feline furry enyi.